eNasha.com - मैनाको खोजी पूर्ण
माघ १९ को कुपछि राष्ट्र संघका विशेष दूत म्याथ्यु कहाने नेपाल भ्रमणमा थिए । रामेछापकी मैना सुनुवार हराएकी दुइ वर्ष भइसकेको थियो । उनकी आमा देवी सुनुवार कहानेलाई छोरी बेपत्ता भएको कहानी सुनाइरहेकी थिइन् । मानव अधिकारवादीहरु उनको एकोहोरो र बलिन्द्र आँशुबाट स्वयं द्रवित भइरहेका थिए । देवीको नेपालीलाई अंग्रेजी अनुवाद गरेर कहानेलाई कहानी सुनाइरहेका अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल पनि सँगै घुँक्क घुँक्क हुँदै थिए । कहाने पनि द्रवित भएर राष्ट्र संघ फर्किए । मैना सुनुवारको कथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्यो र देशमा धेरै वर्ष द्वन्द्वको सिर्जना रहिरहनु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मत बन्यो । त्यसलगत्तै नेपालमा जनआन्दोलन भाग-२ घोषणा भयो र देशमा लोकतन्त्र आयो ।
मैना सुनुवार नेपालको द्वन्द्व समयको एउटा प्रतिनिधि कथा पात्र बनेकी थिइन् । बिना कसूर सेनाद्वारा बेपत्ता बनाइएकी एउटी अबोध किशोरीको यो कथाले नेपाली चलचित्रकर्मीलाई पनि छोएको छ । यसमा चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक के.पी. पाठकले छोटो चलचित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
"यसको पटकथामा काम गर्न मलाई एक वर्ष लाग्यो र यो अझै जारी छ", निर्माता पाठकले भने- "यो चलचित्र राम्रो बन्छ कि नराम्रो त्यो त मलाई थाहा छैन तर एउटा गम्भीर विषयमा गम्भीर तरिकाले चलचित्र बनाउन मन लागेकाले यो थालेँ ।" यसअघि गाजलजस्तो असफल चलचित्रलाई निर्माण तथा निर्देशन गरिसकेका केपी पाठकले त्यसयता आफ्नो व्यक्तित्वलाई फरक रुपमा चिनाउन स्वास्नीमान्छेजस्ता पृथक् डकुड्रामा निर्माण गरिसकेका छन् । जसमा उनको दाबी छ, उनले एउटै मात्र सटमा पूरै चलचित्र सिध्याएका छन् ।
मैनाको हत्या त भयो, हत्यापछि न्यायका लागि गुहार माग्ने मैनाका पिता पूर्ण सुनुवारकै ज्यान कतिपय अवस्थामा जोखिममा पर्‍यो । उनी लुक्दै कहिले पोखरा त कहिले चितवन पुग्थे । यस्तो महत्वपूर्ण चरित्रका लागि निर्देशक पाठकले अहिलेसम्म उपयुक्त पात्र भेटिसकेका छैनन् तर फागुनबाट चलचित्र शुरु गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
मैना बेपत्ता भएको चौथो दिनदेखि मानवअधिकारकर्मीहरुले उनलाई जीवित नै उद्धार गर्न खोजे पनि आखिर उनी मृत र गाडिएको अवस्थामा फेला पारिएकी थिइन् । लोकतन्त्र आइसक्दा पनि उनको हत्याका आरोपीहरुलाई सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन । "कानून र नीतिको यति धेरै खिल्ली उडेको यो जस्तो अनुपम उदाहरण नेपालमा अरु छैनन्", निर्देशक पाठक भन्छन्- "त्यसैले मैले सरकारलाई पनि घच्घच्याउन यो कथा छानेको हुँ ।"
त्यसो त पाठकको यो कथाको मोहको अर्को पाटो पनि छ । विगत केही समययता ठूलो पर्दाका साधारण सिनेमामा भन्दा वृत्तचित्र र फरक विषयका चलचित्र तानिएका पाठक यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत लैजान सकिने हुनाले यसमा काम गरिरहेको बताउँछन् । "र, यो चलचित्र नेपालको कानून र मानवअधिकारको खिल्ली उडाउनेहरुका लागि चेत-चित्र बनोस्", उनको इच्छा छ ।
जब मैनाको कुरा आउँछ, यसमा गाँसिएकी मुख्य पात्र अर्थात् अनिता केसी पनि सँगैमा तानिइन्छिन् । गएको दुइ साताअघि चलचित्र निर्माता-निर्देशक केपी पाठकले उनलाई चलचित्रको मुख्य पात्र भनी सार्वजनिक गरे । त्यसलगत्तै पत्रपत्रिकामा उनको फोटो छापिएपछि उनको क्याम्पस आदर्श कन्या क्याम्पसका साथी र गुरुहरु पनि चकित परे । "सबै वाल्ल परेर मलाई हेर्थे अनि हामीलाई किन नभनेको त भन्थे", उनले बताइन् ।
ललितपुरको इमाडोलकी स्थायी बासिन्दा अनिताको परिवारमा आमा-बुवा, दाइ र बैनी पनि छन् । एक दिदीको विवाह भइसकेको छ भने दाइ अहिले सिंगापुरमा पढ्दै छन् ।
वाल्यकालदेखि नै नाटक र नृत्यकी शौखिन अनिता कैयौँ पटक आफ्नो बाबासँग प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नाटक हेर्न जाने गर्द थिइन् । ७ कक्षादेखि त उनी सार्वजनिक समारोहहरुमा नाच्ने, नाटक खेल्नेसमेत गर्न थालिन् । उनको नाटक र नृत्यप्रतिको मोह देखेर नै परिवारका सदस्यहरुले उनलाई लगनखेलस्थित श्री नाट्य कला केन्द्रमा नृत्यमा भर्नासमेत गरिदिएका छन् ।
गएको भदौमा कलाकार खोज्दै निर्माता-निर्देशक केपी पाठक विभिन्न ठाउँ चहार्दै थिए । उनले त्यही थाहा पाएर अडिसन दिन पुगेकी थिइन् । २०/२२ जना आफ्नो उमेरका युवतीहरुलाई पछि पार्दै उनी यस चलचित्रका लागि छानिएकी थिइन् । पछि बेलुकी उनको घरमा उनी छानिएको खबर पाएपछि त्यो रात त उनी निदाउनै सकिनन् ।
आफ्नो उमेरकी एउटी साधारण स्कूले केटीलाई सेनाका जवानहरुले शारीरिक र मानसिक यातना दिएको कथा उनलाई पनि छोएछ । "मलाई केपी सरले कथा सुनाउनु हुँदा मलाई ज्यादै मन पर्‍यो । यस्तो सिनेमामा काम गर्नु मेरो सौभाग्य हो", उनले बताइन् । सिनेमा फागुनदेखि शुरु हुने भनेपछि उनलाई कहिले पहिलो पटक क्यामेरा फेस गरौँ भन्ने खुल्दुली भइरहेको छ, भनिन्- "शुरुमै यति राम्रो विषयमा काम गर्ने अवसर पाएँ, ज्यादै खुशी लागिरहेको छ । पछि पनि यस्तो राम्रो विषय पाएँ भने खेल्छु नत्र खेल्दिनँ ।"
उनले यो चलचित्रमा अनुबन्ध भएबापत् कति पैसा पाइन् त ? "कुन्नी ! किनभने पैसा बाबाले लिनु भयो । खासमा मैले त पैसाको लागि सिनेमा खेलेको पनि होइन", उनले भनिन्- "एउटा राम्रो विषयमा आफू पनि गाँसिऊँ भन्ने रहरले मात्र !"
उनले भनिन्- "यो विषयमा मैले आफ्नो भागको काम इमान्दारितापूर्वक गर्न सकेँ भने मैनाका लागि सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।"